Vista's Colorful Planet: မြန်မာပြည်ခရီး ( မန္တလေး ၁ )
Amazing views. I do enjoy. thanks
လူကြီး လူငယ်ပဲ ကြားဘူးတယ် ဗစ်ကျမှ လူသေးတဲ့ ...ဟိ
အဌားကားဌားပြီးတော့ နဲ့ လူသေးပဲ...ဟိဟိ
ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီင်္းကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ နေရာတခု
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ ကျောင်းတဖက် ကလေးတွေတဖက်ဆိုသလိုပဲ
အလှအပ ခံစားချိန်မရှိ ရာသီဥတုကို အံတုပြီး ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကို
ဒီပုံလေးတွေမြင်မှ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို မခံစားခဲ့မိတာကို လွမ်းမိသလိုလို ခုပြန်စဉ်းစားရင် ဘ၀မှာ ပျော်စရာဆိုတာ ရှိခဲ့ဖူးလားလို့သံသယတောင်ဝင်မိတယ်
ကတ်ပချီနိုတခွက် ချိစ်ကိတ်တခုနဲ့ ဆီဒိုးနားက ကော်ဖီတခွက်ကိုလည်း သတိယမိပါရဲ့ 
မန္တလေးတောင်ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ လယ်ကွင်းစိမ်း၂တွေနဲ့နီး၂လေးရှိနေပါရဲ့ တစိမ်းတယောက်လို ဖြစ်နေတဲ့ သူတယောက်ကိုလည်း ခပ်စိမ်း၂လေး သတိယမိပါရဲ့ 
နွေရာသီဆို ပူလွန်းလို့နေစရာနေရာမရှိသလိုခံစားမိတဲ့အတွက် ဆောင်းရောက်ရင် စောင်ပါးလေးကို ပေကပ်ခြုံပြီး အအေးဒဏ်ကို အရွဲ့ တိုက်တဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း လွမ်းမိတယ်
ဆောင်းတွင်း မနက်အစောထ ရေချိုးရတိုင်း ကျောင်းပြီးရင် ချင်းပြည်မှာ ကျောင်းဆရာမသွားလုပ်မယ်လို့အကြိမ်၂ပြောမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သတိယမိနေသေးတယ်
စပယ်ပန်းတွေပေါ်ချိန်တိုင်း အပွင့်ရေနဲ့ ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်တွေဆီကနေ အပွင့် ၂၀၀ ၀ယ် ၁၀၀ ကို ဘုရားတင် ၁၀၀ ကို သီကုန်းပြီး ခြင်ထောင်ထဲမှာ ဆွဲချိတ်ပြီး အိပ်ရတဲ့ အရသာကိုလည်း လွမ်းမိပါရဲ့ 
တို့လဲ မန္တလေးသေချာမရောက်သေးဘူး၊ တရက်လောက်နေပြီး မေမြို့တန်းတက်တာ များတယ်၊ ရထားလဲ တခါမှ မစီးဖူးဘူး၊
မနာလိုဖြစ်သွားပြီ၊ နောက်နှစ်မှ အိမ်ကို ၁လပြန်ဦးမယ်။ ဟွန်း
ကိုယ် အညာသူပေမယ့် မန္တလေးကို familiar မဖြစ်ဘူး။ ခဏခဏရောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မသိဘူး။ မရင်းနှီးဘူး။
အညာမှာမွေး၊ အောက်မှာကြီးပြီး ရန်ကုန်ကျမှ ကိုယ့်နေရာလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ခုတော့လည်း ဘယ်နေရာမှ ကိုယ့်နေရာလို့ မထင်တော့ပြန်ဘူး။
ဆီဒိုးနားက တည ၆၅၀၀၀ ဆိုတော့ ဈေးတော်တယ်နော်။ ကောင်းလိုက်တာ။ မန်းလေးရောက်ရင် အဲဒီမှာတဲရမယ်။ ရှူခင်းလဲကောင်းတယ်။
ဓာတ်ပုံလေးတယ် လှတယ်လို့ မချီးကျူးတော့ဘူးနော် အချစ် (မာမီကွန် ခေါ်သလိုပဲ ခေါ်လိုက်တော့မယ်) သူများတွေ ချီးကျူးထားလို့ ဟွင့်ဟွင့်
ဒါနဲ့ စီဘောက်က ရေးလို့ရဘူးနော် ဘာလို့လဲ မသိဘူး regrister လုပ်ပါတဲ့ အင့် ဘီလိုလုပ်ရလဲ သိဘူးရယ် အီးးးဟီးးးးး ငိုပြီ ဗြဲဟဲဟဲဟဲ
မန်းလေး ဘယ်တုန်းက ရောက်ခဲ့လည်း
အရင်တုန်းက ကျုံး ကပိုလှတယ် သဘာဝ အုတ်ရိုးတွေ မပါဘူး